June 30, 2021 समाचार 0
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई सुनको हलो प्रदान गरिने बताउनु भएको छ । ‘१८औं राष्ट्रिय धान दिवस–२०७८’ तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा मंगलवार धान दिवस मनाउने कार्यक्रममा कृषिमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ …
June 30, 2021 राशिफल 0
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार १७ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ जुलाई १ तारीख असार कृष्णपक्ष सप्तमी तिथी पुर्वभाद्रपदा नक्षत्र पश्चात उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सौभाग्य योग बालव करण चन्द्रमां मिन राशिमा आनन्दादि योगमा मुद्गर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म अष्टमीव्रत (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, …
June 30, 2021 प्रमुख समाचार 0
काठमाडौं – पछिल्लो आज देशभर ३ हजार ५९७ जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमित निको हुने दर ९३ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ। हालसम्म ५ लाख ९६ हजार १३२ जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको ११ हजार ५६८ जनाको पिसिआर …
अन्तत : प्रधानमन्त्रीबाट बिदा लिने ओलीको तयारी !
काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँग नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । तर सर्वाेच्च अदालतले के आधारमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्‍यो ? यसभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको पाइएको छ । सर्वोच्चको फैसला सँगै ओली राजीनामा दिन थप दबावमा पारेको विपक्षि गठवन्धनका नेताहरु बताउँछन् …
काठमाडौं । लास्कुखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरु ब’गेर ह्युम पाइपभित्र अ ड्कि एका प्रहरीले जनाएको छ। अ ड्कि एका उनीहरूलाई जेसिभीको सहायताले निकालिएको थियो। ह्युम पाइपमा अ ड्कि एर मृ’त्युु दुई बालकको भएको छ । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ४ बङ्गाबगड स्थित लास्कु खोलामा रहेको ह्युम पाइपमा अ ड …
काठमाडौँ । यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढि भाडा लिने ८ जनालाई काठमाडौँबाट ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ट्राफिक महाशाखाले जारी निषेधाज्ञाको समयमा यात्रुहरु समस्यामा पर्नसक्ने र ठगीन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरि परिचालन गरेको बिशेष टोलीले बढि भाडा लिन सक्ने सम्भावित काउण्टरहरुमा निग्रानी गर्ने, आफै यात्रु बनेर भाडा मोलमोलाई गर्ने, यात्रुहरुसँग गोप्य …
June 30, 2021 रोचक 0
करोडपति बन्ने रहर कसलाई पो नहोला र ? तर, कसरी बन्ने भन्ने बाटोचाहीँ धेरैले नदेखेका हुन सक्छन् । त्यसैले धेरै मान्छेहरु पैसा कमाउने लालचमा नकरात्मक काम गर्न पुग्छन् । र, एकदिन नराम्रोसँग फस्छन् । आज हामी तपाईँलाई करोडपति बन्ने सरल उपाय सिकाउँदै छौं ।करोडपति हुने सजिलो र दिगो बाटो भनेको …
एजेन्सी । भारतीय कलाकार मन्दिरा वेदीले आफ्ना श्रीमानलाई गुमाएकी छन् । बुधवार बिहान, मंदिरा बेदीको जीवनमा शोक छायो । उनको सबैभन्दा बलियो सहारा ढल्यो । उनले आफ्ना श्रीमानलाई गुमाइन् । राज मात्र ४९ वर्षका थिए । मंदिरा बेदीलाई पति राज कौशलको असामयिक निधनले गहिरो चो ट पुगेको छ । राजको …
करिब २ महिनापछी खुलेको सार्वजनिक यातायातले डिजेलको भाउ बढेको भन्दै तोकेभन्दा बढी भाडा असुली
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको दुई महिनापछि खुलेका सार्वजनिक यातायातले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा पछिल्लो भाडा बढेको मिति २०७५ साल असोज ७ गते उल्लेख छ । तीन वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडा सूचीअनुसार चार किलोमिटरसम्मको दर रु १४ उल्लेख छ । त्यसपछि …
कृष्ण कंडेल, छत्र शाही, कल्पना दाहाल र जुरेलीको हिले रोपाइमा यस्तो (भिडियो सहित)
यो असारको महिना हो त्यो पनि अझै बिशेस दिन असार १५ गते। असार १५ गते इन्र्द्रेनीको टिम खेत रोप्न पुगेका छन्। यस महिना भरि मानिसहरुले धान रोपेर बर्षौ भरि खानपुग्ने गरि खेतीमा काम गरिरहेका हुन्छन। समयमै पानी परेका कारण मौसमको अनुकूलता र को रोना भा इरसले मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित …